Hir-Shabelle: Mas’uuliyiin xilka laga xayuubiyey iyo kuwo la magacaabay - Caasimada Online
Home Warar Hir-Shabelle: Mas’uuliyiin xilka laga xayuubiyey iyo kuwo la magacaabay
Hir-Shabelle: Mas’uuliyiin xilka laga xayuubiyey iyo kuwo la magacaabay
Jowhar (Caasimada Online) – Wareegto kasoo baxday xafiiska Wasiirka Arrimaha Gudaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa waxaa xilalkii looga qaaday Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan.
Wareegtada Wasiirka ayaa waxaa xilkii looga qaaday Duqii Magaalada Beledweyne iyo mas’uuliyiin kale, iyadoo lagu magacaabay xubno kale.
Wasiirka ayaa xil ka qaadista iyo magacaabida ku sheegay inay timid kadib wadatashiyo uu la sameeyey Xildhibaanada Federaalka ee ka soo jeeda Hir-Shabeelle.
Wasiirka ayaa xilkii ka qaaday Duqii Magaalada Beledweyne, waxaana uu Magaacay xilkaasi Cali Cabdulqaadir Faarax.
Waxaa sidoo kale xilkii laga qaaday ku gudoomiye ku-xigeenkii Amniga iyo Siyaasadda gobolka Hiiraan, waxaana xilkaasi loo Magacaabay Xasan Ibraahim Cabdulle.
Wasiirka Arrimaha gudaha ayaa sidoo kale xilkii ka qaaday gudoomiye ku-xigeenkii Arrimaha bulshadda Magaalada Beledweyne, waxaana uu xilkaasi u magacaabay Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen.
Si kastaba ha ahaatee, Xil ka qaadista iyo magacaabida mas’uuliyiintaasi ayaa daba socta xil ka qaadis kale oo lagu sameeyay Agaasimihii Madaxtooyada Dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle Xasan Cumar Axmed (Xasan Mahdi),waxana xilkaas loo Magacaabay Cabdi Shakuur Abuukar Xasan.